Tue, Sep 29, 2020 at 4:09pm
अपवादबाहेक सबै मन्त्री हटाउन प्रचण्डकाे प्रस्ताव, तर ओली किन छैनन् तयार ? #आहा खबर# बन्याे १५ मिनेटमै काेराेना संक्रमण पत्ता लगाउने प्रविधि #आहा खबर# सेयर बजारका लगानीकर्ता फेरि झुम्मिए हाइड्रोपावरतर्फ #आहा खबर# गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको लागि भरतपुर महानगरपालिकाले दियाे ५० लाख #आहा खबर# पर्यटकका लागि खुल्याे पदयात्रा र पर्वतारोहण, ७ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिन #आहा खबर# बलिउड ड्रग्स प्रकरण: दीपिकासहित ४ अभिनेत्रीकाे बैंकको खाता अनुसन्धान हुने #आहा खबर# मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा आज पनि ओली–प्रचण्डबीच छलफल सुरु #आहा खबर# ओलीका चार निर्णय: जसले उनलाई निकै विवादित बनायो #आहा खबर# श्रृंखला खतिवडाकी आमालाई कारोना संक्रमण पुष्टि #आहा खबर# आज एकैदिन ९ सय रूपैयाँले बढ्याे सुनकाे मूल्य, ताेलाकाे कति ? #आहा खबर# विवादमा परेपछि यस वर्षको पद्मश्री पुरस्कार तथा पद्मश्री सम्मान रद्द #आहा खबर# बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय माग्न महिला सांसदकाे एक स्वर #आहा खबर# उपत्यकामा जोरबिजोर कडा, बिहान मात्रै ९ सय सवारीसाधन नियन्त्रणमा #आहा खबर# कात्तिकदेखि दुई वटा सहकारीमा सदस्य बन्न नपाइने #आहा खबर# भीडभाड कम गर्न विद्यार्थीको रोल नम्बरमा जोरबिजोर प्रणाली #आहा खबर#
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको लागि भरतपुर महानगरपालिकाले दियाे ५० लाख
चितवन, १३ असाेज । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणको लागि भरतपुर महानगरपालिकाले ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालको उपस्थितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले फाउण्डेसनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल धुर्मुसलाई ५० लाख रूपयाँ बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । भरतपुर महानगरपालिकाले आन्तरिक श्रोतबाट विनियोजित चार करोडमध्ये पहिलो चरणमा ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोशीले..
एजेन्सी । इन्डियन प्रिमियर लिग अन्तर्गत सोमबार साँझ रोयल्स च्यालेन्जर्स बैंगलौर (आरसीबी) र मुम्बई इन्डियन्सले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । नेपाली समयानुसार ७ः४५ बजे सुरु हुने खेलमा मुम्बईले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको छ । यो खेललाई रोहित शर्मा भर्सेस विराट कोहलीको रुपमा पनि हेरिएको छ । ..
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत टोटेनहम र न्युक्यासल युनाइटेडबीचको खेल बराबरीमा सकिएको छ । भर्खरै सम्पन्न खेलमा दुबै टिमले १-१ गोल गर्दै अंक बाँडेका हुन् । खेलको २५ औं मिनेटमा टोटेनहमले लुकास मोउराको गोलबाट सुरुवाती अग्रता बनाएको थियो । यस्तै खेल सकिनै लाग्दा इन्जुरी समयमा न्युक्यासलले पेनाल्टी पायो । भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री (भिएआर)को रिभ्युबाट न्युक्यासलले पाएको पेनाल्टीलाई कालुम विल्सनले खेर जान..
एजेन्सी, ११ असोज । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) अन्तर्गत कोलकता नाइट रायडर्सले सनराइज हैदराबादलाई पराजित गरेको छ । गएराति दुबईस्थित शेख जायद स्टेडियममा सम्पन्न खेलमा कोलकताले हैदराबादलाई ७ विकेटले पराजित गरेको हो । पहिले ब्याटिङ सम्हालेको हैदराबादले २० ओभर खेल्दै ४ विकेटको क्षतिमा १४२ रन जोड्यो । जवाफमा त्यति ठूलो लक्ष्य नरहेको कोलकताले १८ ओभरमा ३ विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो..
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत म्यान्चेस्टर युनाइटेडले ब्राइटनलाई पराजित गरेको छ । भर्खरै सम्पन्न खेलमा युनाइटेडले ब्राइटनलाई उसकै मैदानमा ३-२ गोलले पराजित गरेको हो । खेलको ४० औं मिनेटमा ब्राइटनका निल मोउपेले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै खेलमा सुरुवाती अग्रता बनाएका थिए । तर खेलको ४३ औं मिनेटमा युनाइटेडले उपहार गोल पायो । ब्राइटनका लेविस डंकले आत्मघाती गोल गर्न पुगे । त्यसपछि खेलको..
काठमाडौं, १० असोज । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) अन्तर्गत दिल्ली क्यापिटल्सले चेन्नई सुपर किंग्सलाई ४४ रनले पराजित गरेको छ । गएराति दुबई इन्टरनेशनल स्टेडियममा भएको खेलमा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आवद्ध दिल्लीले महेन्द्र सिंह धोनी कप्तान रहेको चेन्नईलाई पराजित गरेको हो । पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको दिल्लीले पूरा २० ओभर खेल्दै १७५ रन जोड्यो । दिल्लीका लागि पृथ्वी शले ४३ बलमा ६४..
एजेन्सी । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) अन्तर्गत चेन्नई सुपर किंग्स र दिल्ली क्यापिटल भिड्दैछन् । यता नेपालका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने आज पनि बेञ्चमै रहेका छन् । दुबइ इन्टरनेश्‍नल क्रिकेट स्टेडियममा चेन्‍नई टस जितेर पहिले बलिङ गर्ने निर्णय गरेपछि दिल्लीले ब्याटिङको निम्तो पाएको हो । दिल्लीको दोस्रो खेलमा भने सन्दीपले स्थान पाउने आँकलन गरिएको थियो। रविचन्द्रन अश्विनको स्थानमा अमित मिश्रले प्लेइङ इलाभेनमा..
काठमाडौं । राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन खेलाडीहरुको प्रशिक्षण आइतबारदेखि शुरु हुने भएको छ । नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सँगको समन्वयपछि प्रशिक्षण पुनः आरम्भ गर्न लागेको हो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण बन्द गरेको प्रशिक्षण नेपाल ब्याडमिन्टन सङ्घले गत साउनमा पुनः सञ्चालन गरेको थियो । उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै फेरी प्रशिक्षण बन्द गर्नुपरेको थियो । सङ्घका उपाध्यक्ष सुवास श्रेष्ठले आइतबार पुनः..
एजेन्सी । रोयल च्यालेन्जर्स बैंगलोरका कप्तान विराट कोहलीलाई १२ लाख जरिवाना तिराएकाे छ । आयोजकले बिहीबार राति भएको खेलमा किंग्स इलेभेन पन्जाबविरुद्ध स्लो ओभर गरेको भन्दै १२ लाख भारु जरिवाना तिराएको हो । उक्त खेलमा बैंगलोर ९७ रनले पन्जाबसँग पराजित भएको थियो । यसै खेलका दौरान कोहलीले पन्जाबका कप्तान लोकेस राहुलको क्याच छाडेका थिए । उक्त क्याच बैंगलोरका लागि भारी बनेको थियो..
बिहिवार, असोज ८, २०७७ साल
एजेन्सी । अष्ट्रेलियाका चर्चित पूर्व क्रिकेटर डिन जोन्सको भारतमा निधन भएको छ । इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)को कमेन्ट्रीका लागि स्टार इन्डियासँग आबद्ध भई भारतको मुम्बईमा रहेका बेला उनको बिहीबार निधन भएको हो । आकस्मिक रुपमा हृदयघात भएर उनको ५९ बर्षको उमेरमा निधन भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन् । स्टार इन्डियाद्धारा जारी वक्तव्यमा लेखिएको छ, “डिन मेर्भीन जोन्सको निधन भएको जानकारी गराउनु..
बुधबार, असोज ७, २०७७ साल
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गत चैत महिनादेखि बन्द फुटसल आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । फुटसल व्यवसायीहरुको छाता सङ्गठन नेपाल फुटसल सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै व्यवसायी निकै मारमा परेका कारण आजदेखि फुटसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ । नेपाल सरकारले होटल, रेष्टुरेन्ट, सार्वजनिक यातायातलगायत भीडभाड हुने क्षेत्रलाई खोल्ने निर्णय गरे पनि समूहमा खेलिने खेल र गतिविधि गर्न अझै अनुमति..
काठमाडाैं, ७ असाेज। इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) २०२० मा राजस्थान रोयल्सले विजयी सुरुवात गरेको छ । मंगलबार चेन्नई सुपर किंग्सलाई १६ रनले पराजित गर्दै राजस्थानले पहिलो खेलमा जित हासिल गरेको हो । चेन्नईले जितका लागि २ सय १७ रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा चेन्नई २० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै २ सय रनमात्र जोड्न सफल रहयो । राम्रो सुरुवात पाए पनि मध्यक्रममा राम्रो साझेदारी बन्न..
काठमाडाैं, ६ असाेज । इन्डियन प्रिमियर लिग 'आईपीएल' २०२० को तेस्रो खेलमा सनराइजर्स हैदराबाद पराजित भएकाे छ । खेलमा रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोर 'आरसीबी' ले सनराइजर्स हैदराबादलाई १० रनले हराएको हाे । याेसँगै रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरले विजयी सुरुवात गरेको छ । आरसीबीले प्रस्तुत गरेको १ सय ६४ लक्ष्य पछ्याउने क्रममा हैदराबाद १९.४ ओभरमा १ सय ५३ रन बनाउँदै अलआउट हुन पुग्यो । हैदराबादलाई अन्तिम ३० बलमा ४३ रन आवश्यक रहँदा..
काठमाडाैं, ५ असाेज। इन्डियन प्रिमियर लिग 'आईपिएल' २०२० मा किंग्स इलेभेन पञ्जाब पराजित भएकाे छ । दिल्ली क्यापिटल्सले किंग्स इलेभेन पञ्जाबलाई सुपर ओभरमा पराजित गरेको हाे । सुपर ओभरमा दिल्लीका लागि कागीसो रबाडाले बलिङ गर्दा लोकेश राहुल र निकोलस पुरण ब्याटिङमा आएका थिए । राहुलले पहिलो बलमा २ रन जोडे पनि दोस्रो बलमा भने क्याचआउट हुन पुगे । त्यसपछि अर्को बलमा नै रबाडाले पुरणलाई..
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत टोटेनहमले सानदार जित निकालेको छ । भर्खरै सम्पन्न खेलमा टोटेनहमले साउह्याम्प्टनलाई ५-२ गोलले पराजित गरेको हो । साउथह्याम्प्टनको होममा टोटेनहमलाई जित दिलाउन सन हिउंग मिन एक्लैले ४ गोल गरे । उनले पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा, ४७, ६४ र ७३ औं मिनेटमा गोल गरेका हुन् । यस्तै ह्यारी केनले खेलको ८२ औं मिनेटमा गोल गरे । यता..
एजेन्सी । इन्डियन प्रिमियर लिग 'आइपिएल' सिजन २०२० को पहिलो खेलमा चेन्नई सुपर किंग्सले मुम्बई इन्डियन्सलाई ५ विकेटले पराजित गरेकाे छ । जितका लागि १ सय ६३ रनको विजयी लक्ष्य पछ्याएको चेन्नईले १९.२ ओभरमा ५ विकेटको क्षतिमा पुरा गर्दै विजयी सुरुवात गरेको हो । चेन्नईका लागि अंबाती राएडुले अर्धशतकिय पारी खेले । ४८ बल खेलका उनले ६ चौका र ३ छक्काको सहयोगमा ७१ रन बनाए ।..
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत एभर्टनले वेष्टवर्मलाई पराजित गरेको छ । भर्खरै सम्पन्न खेलमा एभर्टनले घरेलु मैदानमा वेष्टवर्मलाई ५-२ गोलले पराजित गरेको हो । एभर्टनको जितमा डोमिनिक काल्भर्ट लेविनले ह्याट्रिक गरे । उनले खेलको ३१, ६२ र ६६ औं मिनेटमा गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरेका हुन् । यस्तै एभर्टनका लागि थप गोल खेलको ४५ औं मिनेटमा हामेस रोड्रिग्वेज, ५४ औं..
काठमाडाैं, ३ असाेज । इन्डियन प्रिमियर लिग 'आईपीएल' ट्वान्टी ट्वान्टी आजबाट शुरु हुने भएकाे छ । शनिबार आईपीएलकाे क्रिकेटको १३ औं संस्करण यूएईको आबुधाबीमा हुने भएकाे हाे । आजकाे पहिलो खेलमा साविक विजेता मुम्बई इण्डियन्स र उप-विजेता चेन्नई सुपर किङ्सबीचको खेल हुनेछ । मुम्बई र चेन्नईबीचको खेल नेपाली समयअनुसार बेलुका पौने ८ बजे शेख जायद स्टेडियममा सुरु हुनेछ । मुम्बई रोहित शर्मा र चेन्नई महेन्द्र..
जेनेभा, २ असोज । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल सङ्गठन (फिफा)ले बिहीबार पुरुष फुटबल विश्व बरियता क्रमलाई छ महिनापछि पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार बेल्जियमले अपरिवर्तित शीर्ष चारमा अग्रणी स्थान बनाउन सफल बनेको छ । कोभिड–१९ महामारीको कारण छ महिनाभन्दा बढीको अन्तरालपछि अन्ततः अन्तराष्ट्रिय खेलहरू खासगरि यूरोपमा सेप्टेम्बरको सुरूमा पुनः सञ्चालन हुँदैछन् । यूईएफए नेसनल लीग खेल अवरुद्ध रहँदा फुटबलको विश्व बरियता क्रम..
काठमाडौं। विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल यथावत स्थानमा रहेको छ। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाद्वारा आज जारी नयाँ वरियतामा नेपाल १७०औँ स्थानमा यथावत रहेको हो। गत महिना पनि नेपाल १७०औँ स्थानमै रहेको थियो। त्यस्तै नेपाल दक्षिण एशियाली राष्ट्रको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेपालभन्दा अघि भारत र माल्दिभ्स रहेका छन्। एक स्थान घटुवा भएको भारत १०९औँ..
काठमाडौं। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले फुटबल प्रशिक्षण खुला गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। एन्फाका पदाधिकारीहरुले आज राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई भेटेर खेलाडीहरु निकै मारमा परेकाले उनीहरुलाई प्रशिक्षणको वातावरण तयार गरिदिन अनुरोध गरेका हुन्। विस्तारै सवै क्षेत्र खुला गर्दै गएकाले अब खेलाडीको प्रशिक्षण पनि सरकारले खुला गर्नुपर्ने एन्फा अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले बताए। उनले खेल क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका..
काठमाडौं । नेपाली यु–२३ फुटबल टोलीका खेलाडी राजेश परियारले भारतीय क्लबबाट फुटबल खेल्ने भएका छन् । भारतको ‘बी’ डिभिजनको आई लिगका लागि अहमदाबादले परियारलाई अनुबन्ध गरेको हो । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफु भारतको अहमदाबादबाट खेल्नलागेको जानकारी गराएका हुन् । आई लिगका लागि परियार बिहीबार भारत जाँदै छन् । परियार अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) एकेडेमीबाट उत्पादित खेलाडी हुा् । उनले गत वर्षको..
काठमाडौं, ३० भदाै। दुर्घटनामा घाइते भएका क्रिकेटर भण्डारीलाई सहयोग गर्न क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल (सिप्यान) ले आग्रह गरेको छ। सडक दुर्घटनामा घाइते भएका नेपाली राष्ट्रिय टिमका सदस्य ललितसिंह भण्डारीलाई सहयोग गर्न इच्छुकका लागि क्रिकेट खेलाडी संघ नेपाल (सिप्यान) ले आग्रह गरेको हाे। आज एक विज्ञप्ति निकाल्दै सिप्यानले क्रिकेट प्लेयर्स एसोसिएसनको सेञ्चुरी बैङ्कमा रहेको खातामा सहयोग गर्न सक्ने जनाएको छ। सुरुमा धनगढीमा उपचार गराएका भण्डारीलाई..
काठमाडौं, ३० भदाै। नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) खेल्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पुगेका छन् । सन्दीप सोमबार राती यूएईमा पुगेर दिल्ली क्यापिटल्सको टिम होटेलमा बसिसकेका छन् । दिल्लीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सन्दीप यूएईमा आईसकेको जनाकारी दिएको छ । सन्दीप सोमबार बिहान यूएईका लागि उडेका थिए । सन्दीप आइतबार यूएई पुग्ने कार्यक्रम थियो । तर उडान छुटेपछि एक दिन..
लण्डन, ३० भदाै । सर्वाधिक कमाउने फुटबल खेलाडीको सूचीकाे पहिलाे नम्बरमा लियोनल मेस्सी रहेका छन् । बार्सिलोनाका मेस्सी सन् २०२० मा फुटबलमा सर्वाधिक कमाउने खेलाडी भएका हुन् । मेस्सीकाे वार्षिक आम्दानी १२ करोड ६० लाख डलर रहेकाे छ भने युभेन्टसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो ११ करोड ७० लाख डलर कमाइसँगै दोस्रो स्थानमा रहेकाे फोर्ब्सले जनाएकाे छ । यस्तै तेस्रो स्थानमा पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) नेयमार छन् । चौथो स्थानमा पीएसजीकै अर्का खेलाडी..
एजेन्सी । अमेरिकी ओपनको यस वर्षको उपाधि अस्ट्रियाका डोमिनिक थाइमले जितेका छन् । पहिलो दुई सेट लगातार हारेर निराश भइसकेका थाइमले अन्तिम सेटमा टाइब्रेकमा जर्मनीका अलेक्जेन्डर जेरेफलाई पराजित गरेका थिए । कोरोनाभाइरस महामारीका कारण विनादर्शक आर्थर एश रंगशालामा भएको यस प्रतिस्पर्धामा थाइमले जेरेफलाई २–६, ४–६, ६–४, ६–३, ७–६ ९६० ले पराजित गरे । यो उनको पहिलो ग्रान्डस्लाम उपाधि हो । झण्डै चार..
एजेन्सी । फ्रान्सेली च्याम्पियन पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) र मार्सेबीच आइतबार भएको फ्रेन्च लिग वानको खेलमा पीएसजी र मार्सिलेका खेलाडीबीच खेल मैदानमै झडप भएको छ । आइतबार राति पीएसजीको घरेलु मैदानमा भएको खेलको अन्तिम समयमा खेलाडीहरूबीच झडप भएको हो । दोस्रो हाफको इन्जुरी समयमा ब्राजिलियन सुपरस्टार नेयमारसहित ५ खेलाडीले रातो कार्ड पाएपछि मैदान छाेड्ने क्रममा ब्राजिलियन फरवार्डले आफूमाथि जातीय टिप्पणी गरिएको बताएका थिए । वैकल्पिक..
कञ्चनपुर, २९ भदाै । कञ्चनपुरमा ट्रकको ठक्करबाट घाइते भएका राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडी ललित भण्डारी खतरामुक्त भएका छन् । उनकाे अवस्था पहिले भन्दा सामान्य हुँदै गएकाे पूर्वकप्तान पारस खड्काले जनाएका छन्। भण्डारीको हाल कोहलपुर मेडिकल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। उनको दुवै हात र खुट्टाको अपरेशन हुन लागेको खड्काले ट्विटर मार्फत जानकारी गराएका हुन्। धनगढीबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको से १ ख १३२४ नम्बरको ट्रकले..
काठमाडौँ, २९ भदाै । दोस्रो एकदिवसीय खेलमा अस्ट्रेलियालाई इङल्याण्डले पराजित गरेको छ । गएराती सम्पन्न खेलमा इङल्याण्ड २४ रनले विजयी भएको हो । इङल्याण्डले दिएको २३२ रनको मध्यम लक्ष्य पछाएको अस्ट्रेलिया ४८.४ ओभरमा अल आउट हुदै २०७ रन मात्र बनाएपछि खेल २४ रनले हारेको हो । अस्ट्रेलियाका लागि कप्तान एरोन फिन्चले सर्वाधिक ७३ रन बनाए भने मार्नस लाबुचांगेले ४५, एलेक्स केरीले ३६ रन बनाएका..
एजेन्सी । लिभरपुलले इंग्लिस प्रिमियर लिग अन्तर्गत पहिलो खेलबाट विजयी सुरुवात गरेको छ । गत सिजनको साविक विजेता लिभरपुलले लिड्स युनाइटेडलाई ४-३ गोलले पराजित गरेको हो । लिभरपुललाई जित दिलाउन मोहम्मद सलाहले ह्याट्रिक गरे । उनले ४ औं मिनेटमा पेनाल्टीमार्फत, ३८ औं मिनेटमा र पुनः ८८ औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गर्दै ह्याट्रिक गरेका हुन् । यस्तै लिभरपुलका भर्जिल भान डाइकले थप एक..
Results 2017: You are at page 1 of 68
बन्याे १५ मिनेटमै काेराेना संक्रमण पत्ता लगाउने प्रविधि
पर्यटकका लागि खुल्याे पदयात्रा र पर्वतारोहण, ७ दिन अनिवार्य क्वारेन्टिन